Maxaa loo sii daayay gabadhii dishay aabaheed oo horay feeryahan u ahaa? - BBC News Somali
Maxaa loo sii daayay gabadhii dishay aabaheed oo horay feeryahan u ahaa?
Image caption Gabadha aabaheed dishay ayaa laga sii daayay xabsi guri
Dacwad oogeyaasha dalka Talyaaniga ayaa sii daayay gabar xabsi guri ku jirtay oo 19 jir ah, taasoo aabaheed ku dishay aqalkooda oo ku yaalla waqooyiga magaalada Rome.
Saraakiisha ayaa sheegay in gabadhan aabaheed uu si joogto ah u dhibaateyn jiray.
Deborah Sciacquatori ayaa qaadday tallaabo ay nafteeda ku difaaceysay, xilli uu aabaheed ku sameynayay tacaddi, sida uu sheegay mid ka mid ah dacwad oogeyaasha.
Gabadhan ayaa markii hore loo heystay dambi la xiriira inay qof gawracday, balse hadda waxay wajaheysaa kiis ka khafiifsan sidaas oo ku saabsan inay ku xad gudubtay sharciga isdifaacidda nafta, inkastoo kiiskaas xitaa ay suurtagal tahay in la iska laalo.
“Saaxiibkay ayay iiga dileen weerarkii masaajidka”
Ninkii weeraray askariga Faransiiska ah oo dhiigiisa laga helay daroogo iyo khamri
Dacwad oogaha go'aankan shaaciyay ayaa sheegay in gabadhu ay aabaheed ka bariday inuu ka joojiyo tacaddiga uu ku hayo.
"Waxaa macquul ah in maalmaha soo socda laga codsado garsooraha baaritaanka wada inuu dacwaddan iska xiro, sababtoo ah gabadha yar, marka loo eego waxa aan ilaa hadda ognahay, waxay difaaceysay nafteeda", waxaa sidaas yidhi dacwad ooge lagu magacaabo Francesco Menditto.
'Nolol Cadaab ah'
Kiiskan ayaa abuuray su'aalo ku saabsan tacaddiyada qoysaska ka dhex dhaca ee dalka Talyaaniga, waxaana su'aalahaas kamid ah goorta ay sharci tahay in uu qofku naftiisa difaaco.
Ninka dhintay oo ahaa 41 jir lagu magacaabi jiray Lorenzo Sciacquatori, horayna u ahaa feeryahan, ayaa lagu yaqaannay inuu rabsho badnaa.
Wuxuu xabsi galay sanadkii 2016-kii, kadib markii lagu helay dambi ah inuu weeraray askari ka tirsan booliska.
Sidoo kale waalidiinta xaaskiisa ayaa sheegay in gabadhooda uu garaaci jiray muddo 20 sano ah.
Deborah Sciacquatori ayaa iyadana la sheegay inay muddo dhowr sano ah kala kulmeysay dhibaato, balse hooyadeed ayaan booliska ku war galin jirin waxa ka socda guriga, maadaama ka cabsaneysay in gabadheeda laga fogeeyo.
Guud ahaan qoyskeeda ayaa ku taageeray kiiska la xiriira inay nafteeda difaaceysay.
Sida uu aabuhu ku dhintay
Lahaanshaha sawirka ANSA
Image caption Gabadha ayaa la sheegay inay isdifaaceysay
Warar ay shaaciyeen warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in Sciacquatori uu guriga dib ugu soo laabtay maalin Aaxad ah isagoo khamri soo cabay, kadibna uu dhowr saacadood ku qeylinayay xaaskiisa iyo gabadhiisa.
Deborah Sciacquatori ayaa markii hore isku soo xirtay qol ay kula jirtay ayeeyadeed, si ay uga badbaadaan weerar uga imaan kara aabaheed.
Balse markii uu dhankii qolkooda soo aaday, waxay uga digtay inuu weerar kusoo qaado, sida uu dacwad oogahaba sheegay.
"Aabe jooji, intaas ku ekeey", ayey ku tidhi.
Kadib markii uu joogsan waayay ayey la dagaallantay, waxayna madaxa uga dhufatay feer.
Isaga ayaa horay u baray sida loo feertamo, waxayna aad u jecleyd inay ku biirto ciyaaraha feerka.
Intaas kadib waxay isku dayday inay guriga ka tagto, ayna sii kaxeysato hooyadeed iyo ayeydeed, laakiin aabaheed ayaa u hanjabay.
Deborah ayaa markaas soo qaadatay mindi ku jirtay jikada, waxayna dhuunta ka galisay aabaheed, halkaasoo uu dhaawac aad halis u ah ku gaaray.
Inkastoo ay isku dayday inay dhiigga ka joojiso, wuxuu goor dambe u dhintay dhiig bax.
Qof goob jooge ah oo ay soo xigteen dacwad oogeyaasha ayaa sheegay inuu maqlay iyadoo leh: "Ha iga dhimanin, waan ku jeclahay".
Garsooreyaasha ayaa maalmaha soo socda go'aan uga gaari doona in lasii amba qaadi doono dacwadda ka dhanka ah Deborah Sciacquatori iyo inkale.